Wasiirka Wasaaradda Dastuurka iyo arrimaha Federaalka oo sheegay inaan wax boos ah uga banaanayn Baarlamaanka hada jira ansixinta Destuurka Cusub | Anti-Tribalism
← Jaamacadda California ee Sen. Diego oo Dhowr iyo laabtan Sanno ka dib ka Sameysey Cilmi Baaris Gobolka Banaadir
Shirkii Ururada Bulshada Rayidka Soomaaliyeed ee lagu qabtay dalka Uganda oo laga soo saaray qodaba Muhiim ah →
Wasiirka Wasaaradda Dastuurka iyo arrimaha Federaalka oo sheegay inaan wax boos ah uga banaanayn Baarlamaanka hada jira ansixinta Destuurka Cusub
28-March-2012 (MMG)Avv. C/raxmaan Xoosh Jabriil Wasiirka Wasaaradda Dastuurka iyo arrimaha Federaalka oo qaar ka mid ah warbaahinta ugu waramayay magaalada Entebbe ee wadanka Uganda ayaa sheegay qabyo qoraalka dastuurka cusub ee Soomaaliya ee xilligaan la tashigiisu uu ka socdo gudaha wadanka Soomaaliya in la dhameyn doono 20-ka bisha April ee sanadkaan, wuxuuna tibaaxay hirgelinta dastuurkaasi inaanay wax boos ah uga bannaaneyn Baarlamaanka iminka jira.
Wasiirka Wasaaradda Dastuurka iyo arrimaha Federaalka Avv. C/raxmaan Xoosh oo sharaxayay cidda ansixineysa dastuurkaasi ayaa wuxuu ku celceliyay ansixinta dastuurka inay u codeyn doonaan Baarlamaanka cusub ee la dhisi doono xilliga KMG ah, waxaana uu ku nuux nuuxsaday in dastuurkaasi uu muhiim u yahay ummadda Soomaaliyeed waa sida uu hadalka u dhigaye.
Mar uu Wasiirka Dastuurka ka sheekeynayay aragtida Dowladda KMG ah ee ku aadan go’aanadii ka soo baxay shirkii Entebbe ee ururrada bulshada rayidka ayaa wuxuu xusay ururrada bulshadu inay yihiin xubin muhiim ah, wuxuuna hoosta ka xariiqay inay yeesheen dood kulul oo ku aadan dhismaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan, soo xulida ergooyinka ansixinaya dastuurka cusub iyo hannaanka lagu soo magacaabi doono Xildhibaanada Baarlamaanka cusub NFP.
Wasiirka Dastuurka waxa uu dhinaca kale ku celceliyay inay qaadanayaan oo kaliya hadba wixii macquul ah ee ku aadan go’aanada shirkaasi, balse aanay ku qasbaneyn inay wada qaataan.
23 ilaa 26-kii bishaan ayaa magaalada Entebbe waxaa ka dhacay shirkii ururrada bulshada rayidka ah ee lagaga hadlayay kaalinta ay ururradaasi ka qaadanayaan xilliga kala guurka, iyadoo dowladda KMG ah iyo beesha caalamkaba loo diiday inay shirkaasi ku yeeshaan wax cod ah marka laga reebo inay goob joog ka noqdeen mooyee.